Indawo yokuhlala ezinzileyo kwi-Creeper -Bambelela kwii-330lbs!
Ikhaya / iimveliso / Hlala-KwiCreater
Inqwelomoya yokuQengqeleka kweNgcaciso
Isitulo esiqhekezayo esinamaqonga amakhulu okuhlala, isilayidi setreyi yezixhobo kunye nedrowa. Uya kulawula igaraji kunye nendlela yokuhamba kule nqwelo yomgcini. Yenziwe ngeplastikhi eyomeleleyo, amavili aqengqeleka kakuhle kwindlela yokuhamba kunye nekhonkrithi ngokufanayo.Khulu kuzo zonke iintlobo zokusetyenziswa kubandakanya iinkcukacha zemoto okanye umsebenzi woomatshini.
Qengqa indlela yakho ngenkcukacha.
Zili-3 iitreyi zombutho ezahlukileyo.
Bamba ukuya kwi-330lbs!
Poly I-polyurethane eqhubekayo kwisakhelo sesinyithi
Yinto entle yomelele, kulula ukuyidibanisa, ikulungele ukuhlala kuyo.
Isantya kunye nokuFikelela ukuze uMsebenzi wenziwe
Le compact-sit-creeper ihlala iyintandokazi yabathengi ukusukela oko sayenza iminyaka embalwa,
kwaye akukho mathandabuzo ukuba inento yokwenza nokuphakama kwayo okufanelekileyo, ubungakanani bemilinganiselo.
nolwakhiwo olukumgangatho ophezulu. Le yi isixhobo esifanelekileyo kuni nonke esisezantsi nesineenkcukacha ezimdaka
kunye nemisebenzi yolondolozo. Unokudibana kwigaraji okanye kwindlela yakho yokuhamba.
Umzimba wenqwelwana yomgcini-ntofontofo, isitulo esenziwe nge-ergonomic senziwe ngeplastikhi enzima kodwa yayinjalo
kwanele ukuba uchithe iiyure ezingama-2-3 upolishe kunye ne-waxing. Iplastiki ilungelelaniswe ngokuqina okumangalisayo
isakhelo sesinyithi kunye nomsebenzi onzima wee-intshi ezine. Iqengqeleka KAKUHLE KAKHULU kwigaraji enomgangatho opeyintiweyo kodwa
nakwikhonkrithi engaphandle eqatha iyimfuneko. Amavili amabini amane atshixiwe, kwaye kufuneka agcinwe
wena endaweni xa sele uyifumene indawo yakho emnandi.
Isixhobo se-creeper ye-FUOU enobude obugcweleyo bokukhupha idrowa kunye neetreyi ezimbini ezisuswayo, ezintle kwaye ziphakamise ngokulula nokucima,
Indibano yayiliqhekeza lekhekhe kwaye woyika iiprojekthi zendibano.
Esi sixhobo sokuchaza imoto sinezinto zokugcina ezikrelekrele. Iza isitokhwe kunye neetreyi ezimbini zokufikelela
Nokuba kukuphela kwe-creeper, izinto zokubopha kunye nezinye izixhobo ezincinci, ezibandakanya abanini beebhotile abanokubamba zethu
I-ounce enye okanye iibhotile ze-8. Ityesi yokugcina izinto ezinikezela ngeebrashi, iitawuli kunye neephedi,
kuhlala kwiziko le-creeper. Unokwenza kwakhona i-creeper yakho ngokongeza amandla okugcina kunye nokuthuthuzela.
Ihleli kubude obugqibeleleyo ukufikelela kumavili omabini aphezulu kunye namacandelo asezantsi ngaphandle komzamo omkhulu, ngakumbi
ezi zingasentla. Ilungele ukusetyenziswa xa kutshintshwa iziqhoboshi, inqwelo-mafutha icacisa okanye isebenza ujikeleze indlu efuna iphantsi
Umsebenzi wendawo endaweni yokuguqa, Inkululeko elungileyo yokuhamba kunye namavili amakhulu.
Ufuna ukuyibhukisha? Sisoloko Apha ukuba unomdla
HLALA-KWI-CREEPER, Iinqwelo zeNgingqi eziQengqwayo, isihlalo seCreeper / isixhobo
Umkhiqizo ocacileyo. Imodeli encinci / iModeli ePhakathi
Ubungakanani Product 375x360x260mm / 455x320x255mm
ukupakisha I-1 PC Creeper ipakishwe kwibhokisi enye enkulu
MOQ Iifayile ze-400
Umhla wokuzisa Iiveki ezi-3-4.